Maamulka Jubbaland Oo DF ah ku eedeyey in ay si qaldan u maamusho odeeqaha caalamiga ah ee dalka – Radio Daljir
Maamulka Jubbaland Oo DF ah ku eedeyey in ay si qaldan u maamusho odeeqaha caalamiga ah ee dalka
Luulyo 26, 2013 3:30 b 0
Kismaayo, July 26, 2013 – Afhayeenka maamulka Jubbaland Cabdinaasir Seeraar ayaa war-bixin kooban ka siiyey saxaafada gudaha howgalo ka socday magaalada Kismaayo, kuwaasi oo ay ciidamada Jubbaland waddeen dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay.
Cabdinaasir Seeraar oo la hadlayey idaacadaha maxaliga ah ee gudaha dalka ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in amaanka magaalada Kismaayo ay si buuxda gacanta ugu dhigeen, isagoo tilmaamay in howgaladii maalmihii tegey ay ku soo qabteen tobbanaan ruux oo dhib wadayaal ah.
? Laamaha amaanku waxay soo qabteen rag isugu jira, kuwa amni darrada wadda, Tuugada magaalada, ciidamo laftooda dhibaato ku hayey shacabka, iyo kuwa ka tirsan al-shabaab oo ay baaris ku socoto? ayuu yiri Mudane Seeraar.
Docda kale Afhayeenka Jubbaland wuxuu ku eedeyey Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in ay deeqihii caalamka iyo adeegyadii horumarinta ku koobtay Muqdisho, wuxuunta taas bedelkeeda sheegay in ay u gudbiyeen Qaramada Midoobey.
?Afhayeen Seeraar wuxuu tilmaamay in ay la kulmeen wefdi uu hugaaminayey Mr. Lazzarani oo Qaramada Midoobey u qaabilsan arimaha bini?adantinimada, kuwaasi oo Kismaayo ku arkay xaalad kasta oo ka jirta iyo dhibaatada haysatada dadka danyarta ah ee gobolka, isagoo taas ku eedeyey Dowladda Federaalka ah oo deeqihii dalka aan u maamulin sidii la rabay.
Ugu dambeyntii maamulka Jubbaland waxay rajo wanaagsan ka muujiyeen wada-hadalladii u dhexeeyey maamulkaas iyo Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, kuwaasi oo ka kala dhacay Nairobi iyo magaalada Adis Ababa ee dalka Ethopia, Afhayeen Seeraar wuxuu sheegay in isfahanku meel wanaagsan marayo, isla markaasna ay rajo ka qabaan in si fiican wax ku dhamaadaan.
Tartan iyo Taclin oo weli socda iyo dugsiyo xalayto u soo baxay wareega saddexaad ee Tartanka
Isimada gobolka shabeelaha Hoose Oo Dowladda iyo dhinacyadii dagaalamay ugu baaqay dagaal joojin